Warqadda Beesha Caalamku soo gaadhsiisay Somaliland ayaa lagu socodsiiyay, dhinacyada doorashadu khusayso oo kala ah Madaxweyne Siilaanyo, Saddexda Xisbi Siyaasadeed, laba gole baarlamaan | Saxil News Network
Warqadda Beesha Caalamku soo gaadhsiisay Somaliland ayaa lagu socodsiiyay, dhinacyada doorashadu khusayso oo kala ah Madaxweyne Siilaanyo, Saddexda Xisbi Siyaasadeed, laba gole baarlamaan
Hargaysa (Saxil News.com)-Wefti ay hogaaminaysay Miss Cat Evan, Safiir Ku-xigeenka Safaaradda Ingirisku uu ku leeyahay Waddanka Ethiopia, oo ka koobna 4 xubnood ayaa Dhinacyada Doorashooyinka Somaliland khuseeyaan u soo gudbiyay mawqifka Beesha Caalamka ee Somaliland doorashada ka taageeraa ku qabaan wakhtiga doorashada ee Guddida doorashada Somaliland soo jeedisay.
Weftigan Ingiriiska oo sidoo kale ka wakiil ah Guddiga Doorashooyinka iyo Dimuquraadiyadda oo fadhigooddu yahay Nairoobi iyo Safaaradda Ingiriiska ee Magaaladda Addis Ababa ayaa sheegay inay si xooggan u taageersan yihiin Wakhtiga guddida doorashadu soo jeedisay inay ku qaban karaan doorashada ee ku beegan 1-da June 2016-ka.
Beesha Caalamka ayaa sheegaysa inay si weyn uga niyad jabtay riixista doorashada Somaliland, iyagoo sheegay in intaas wax ka
badani keeni doonto xidhiidhka Somaliland iyo waddamada horumarka iyo dimuqraadiyadda ka taageera oo xumaada. Waxay waxaan la aqbali karrin ku tilmaameen Muddo kordhin kasta oo Dano siyaasadeed lagu saleeyay oo aan arrimo farsamo ku lug lahayn.
Warqadda Beesha Caalamku soo gaadhsiisay Somaliland ayaa lagu socodsiiyay, dhinacyada doorashadu khusayso oo kala ah Madaxweyne Siilaanyo, Saddexda Xisbi Siyaasadeed, laba gole baarlamaan iyo Komishanka, kuwaasi oo lagaga codsay inaan la siyaasadayn muddada Komishanku u cayimay doorashada maadaama Doorashadu wakhtigeeda ugu dhici wayday arrimo farsamo oo diwaangalinta iyo 6 bilood oo sharciga diwaangalintu dhigaya ay ka mid yihiin.
Warqadda,Beesha Caalamku soo gudbisay ayaa lagu sheegay in Weftiga Safiir xigeenka Ingiriiska ee Addis Ababa hogaaminaysaa sidaan aragtida beesha Caalamka ee ku aadan dhamaystirka wakhtiga doorashada ee loo asteeyay 1-da bisha June 2016-ka.
Beesha Caalamka ayaa aragtideeda arrimaha doorashada Somaliland ku soo koobay dhawrkan qodob;
1. Madaxweyne,Saddexda Xisbi siyaasadeed iyo labada aqal Baarlamaan ba waxaanu idinku ammaanaynaa inaydaan siyaasadayn Go’aaminta Komishanka doorashada ee wakhtiga Doorashada oo loo asteeyay 1-da June 2016-ka iyo Xaqa Komishanku u leeyahay soo gudbinta wakhtiga doorashada oo farsamaysan;
2. Bulshada Caalamku waxay ka niyad jabsan tahay inaan wakhtiga Komishanku soo jeediyay ahayn ka hor dhamaadka 2015-ka, anagoo u aragna inay suuro gal ahayd in dawladdu dib ugu noqoto Qodobka 7-aad farqaddiisa 2-aad ama 26-aad farqaddiisa xeerka diwaangalinta codbixiyaha(Xeer lam/37), kaas oo muddo 6 bilood ah dib u ridaya doorashada marka la dhammeeyo diwaangalinta codbixiyaha;
3. Haseyeeshee, Beesha Caalamku waxay Somaliland ka codsanaysaa inay talaabooyinka dambe ee hanaanka doorashooyinka si adag u raacdo , iyadoo la sharfayo Wakhtiga Komishanka doorashadu soo gudbiyay.
4. Bulshadu caalamku muddo kordhin kasta oo ku dhisan danno siyaasadeed waxay u aragtaa ama u tixgalinaysaa waxaan la aqbali karrin, waxaanay saamayn doontaa xidhiidhka Siyaasadeed iyo horumar ee aanu la leenahay Somaliland;
5. Beesha Caalamku waxay u taagan tahay oo diyaar u tahay inay taageerto hanaanka doorashada Somaliland farsamo ahaan iyo diblamaasiyad ahaan labadaba;
Waxaanu si xushmad leh u rajaynaynaa inaanu sii wadno la shaqaynta Xukumadda, Guurtida, Xisbiyada Siyaasadda iyo Komishanka doorashada si loo xaqiijiyo in doorashooyinkan taariikhiga ah ee Madaxtooyada iyo baarlamaanku ugu dhacaan si aan habsan lahayn.”
Weftiga ayaa maanta kulan la yeeshay Shir gudoonka Guurtida oo ay u gudbiyeen mawqifkoodan, iyagoo sidoo kale la filayo inay dhamaan dhinacyada doorashadu khusayso la shiraan.